Bullbinary Bonus - Binary Options $25 အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆု
binary Options ကိုအပိုဆု
ဝက်ဘ်ဆိုက် URL ကို
ဖုန်းကိုပံ့ပိုးမှု, အီးမေးလ်ပို့ရန်ပံ့ပိုးမှု, တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းပံ့ပိုးမှု
နိမ့်ဆုံး 1st Deposit
Check Out Our Latest Bullbinary ဆုငှေ & ဆန်းစစ်ခြင်း 2017!
The minimum deposit amount is $100 USD which is higher compared to the minimum deposit amount of the other brokers, however, the minimum trading amount is only $1 အမေရိကန်ဒေါ်လာ. The payout rating can reach up to 83% to 85%.
Bullbinary is powered by Spot 2.0 ထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း. You can download it asadesktop app, asabrowser extension or asamobile app for Android and iOS.
The last is the $25 အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆု, which isarisk-free option for people who want to test the platform or who want to trade without risking real money. You can trade this virtual $25 for as low as $1, and upon reaching the required trading volume, you can withdraw the money in real cash.
a Comment ချန်ထား စာပြန်ရန် Cancel
အီးမေးလ်ပို့ရန် (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ) (လိုအပ်)
အထိ $2000 ဆုငှေ ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
အထိသိုက်ဆုကြေးငွေ 115% ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
$20 အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆု! ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
55% အပ်ငွေတွင် NordFX အပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
25% Desposit အပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်
$30 ကွိုဆိုအပိုဆု + ပထမဦးစွာအပ်ငွေအပိုဆု! T က & CS Apply ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ်